EMUI 9.1 dia havoaka amin'ny telefaona 18 an'ny Huawei mandritra ny herinandro | Androidsis
Huawei dia manambara izay telefaona havaozina ho EMUI 9.1
Eder Ferreño | | Huawei, Android Version
EMUI no sosona fanaingoana ho an'ny telefaona Huawei sy Honor. Amin'izao fotoana izao misy mpampiasa 470 tapitrisa eo ho eo izay mampiasa an'io sosona io amin'ny findainy, noho izany dia misy fisiana lehibe eo amin'ny tsena. Ny orinasa dia nanaparitaka ny kinova vaovao nandritra ny herinandro vitsivitsy, EMUI 9.1, izay efa nahatratra telefaona sasany sahady. Ny marika izao dia mamela antsika ny lisitry ny telefaona vaovao hanana izany tsy ho ela.
Huawei dia nanambara ny lisitry ny telefaona 18 izay hanana EMUI 9.1 tsy ho ela. Ireo finday rehetra ireo dia havaozina amin'ity fahavaratra ity, satria ny marika sinoa dia efa nanamafy tamin'ny fomba ofisialy. Ka io fanavaozana io dia zava-dehibe amin'ny mpampiasa maro. Ny telefaona Honor dia tsy voatonona amin'izao fotoana izao.
Ny finday rehetra amin'ity lisitra ity dia maodely Huawei, noho izany tsy fantatsika hoe rahoviana no hisy vaovao mitovy amin'ny maodely Honor. Saingy farafaharatsiny mpampiasa maro no ho afaka hahafantatra ny daty hahafahan'izy ireo miditra amin'ny EMUI 9.1 amin'ny fomba ofisialy. Hatramin'ny 27 jona dia misy telefaona efatra iza no hanana izany: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X ary Huawei 20 RS Porsche Design.
Raha ny telefaona sisa amin'ny lisitra dia tsy maintsy miandry ela kokoa. Amin'ny anao, ny fanavaozana dia havoaka mandritra ny volana Jolay, araka ny nohamafisin'ny orinasa. Ireo telefaona havaozina dia: Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 RS Porsche Design, Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro, Huawei Y9 2019, Huawei Y6 2019, Huawei Y5 2019 , Huawei Nova 3, Huawei Nova Iza, Huawei Nova 3e ary Huawei Nova 3.
EMUI 9.1 dia hisy kinova mifantoka indrindra amin'ny fampisehoana. Araka ny efa nianaranao dia hampiditra fanatsarana fanatanterahana izay mety hahatratra 60% amin'ny enta-mavesatra avy amin'ny antoko fahatelo. Noho izany, azontsika atao ny manantena fahombiazana tsara kokoa amin'ny fampiharana amin'ny fotoana rehetra toy izao.
Tokony hisy ihany koa fanovana kosmetika amin'ny EMUI 9.1. Na dia toa fanovana kely aza izy ireo na ahoana na ahoana, dia tsy tena zava-baovao amin'ireo mpampiasa amin'ny telefaonin'izy ireo izany. Ho an'ireo mpampiasa izay ao anaty lisitra ny telefaoniny dia mijanona kely fotsiny ny miandry kely ny fandefasana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei dia manambara izay telefaona havaozina ho EMUI 9.1
Ahoana ny fomba hisorohana ny Smart Lock tsy hahatadidy ny teny miafinao
Ny Galaxy S10 5G dia mpivarotra any Korea atsimo